ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် စွမ်းအားရှင် - Kanbawza Tai News
Home ဆောင်းပါး ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် စွမ်းအားရှင်
August 24, 2020 ဆောင်းပါး,
စွမ်းအားရှင်ဆိုသည်နှင့် ၂၀၁၃ ခု၊ မေ ၃၀ ဒီပဲယင်း အရေး အခင်း၊ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပွဲကို သတိရသွားကြပေလိမ့် မည်။
ပြောင်းလဲခြင်း ဆိုသည်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေ အလုပ်များနေချိန်၊ လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ မဲ ဆွယ်စည်းရုံးနေကြချိန်၊ အမတ်လောင်းတွေရော မိမိပါတီအောင် နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးစားနေကြချိန်ဖြစ်သည်။ ဤသို့သောအချိန် တွင် ဤဆောင်းပါးခေါင်းစဉ် မြင်လိုက်သည်နှင့် နိုင်ငံရေး ဆောင်းပါးဟု ထင်ကြသည်မှာ စာဖတ်သူများဘက်မှ မှန်ပါ သည်။ သို့သော် တကယ့်တကယ်စာရေးသူ၏ ဆောင်းပါးအများ စုမှာ လူလတ်ပိုင်းများ မိမိကိုယ်ကို ပြုပြင်ရေးနှင့် မိဘအုပ်ထိန်း သူများ သားသမီးများနှင့် နောင်လာနောက်သား လူငယ်မျိုး ဆက် သစ်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ရေးကိုသာ ဦးတည်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စာရေးသူတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာ များစွာ ရှိနေသည်မှာ အားလုံးအသိပင် ဖြစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်း ကျင်ကို ပြောင်းလဲရုံ၊ ခေတ်စနစ်ကို ပြောင်းလဲရုံနှင့် ပြီးပြည့်စုံ သောပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်ပြီလား ဆိုလျှင် မပြီးပြည့်စုံသေးပါ။ မိမိ ကိုယ်တိုင်၏ ပြောင်းလဲစရာများကို ဦးစွာပထမ ပြောင်းလဲရပေ လိမ့်မည်။ မိမိကိုယ်တိုင်၏ ပြောင်းလဲရမည့် စွမ်းအားရှင်မှာ မည်သူနည်း။ ရှင်းပါသည် မိမိပင်လျှင် မဟုတ်ပါလား။ ဆက်စပ် တွေးကြည့်ရမည်ဆိုလျှင် တိုင်းပြည်၏ ပြောင်းလဲရေးအတွက် စွမ်းအားရှင်မှာ မိမိတို့ပြည်သူပြည်သားများပင် ဖြစ်သည်။
မိမိကိုယ်တိုင်က မပြောင်းလဲသေးဘဲ စနစ်ပြောင်းလဲရေး၊ တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲရေးများကို ရေပက်မဝင် ပြောနေကြသူများ မှာ အလွန်အင်မတန် ရယ်စရာကောင်းလှသည်။
The sandal-wood, though it be dry, surrender not its fragrance. The sugar-cane, though it be put under grinder, surrender not its sweetress.
The virtuous, though he be under afflication, surrender not his conduct.
"စန္ဒကူးပင်၊ စန္ဒကူးသားသည် သွေ့ခြောက်သွားသော် လည်း သူ့၏မွှေးရနံ့ကို မစွန့်။ ကြံသည်ကြိတ်စက်အတွင်း ရောက်သွားသော်လည်း သူ၏ချိုသောအရသာကို မစွန့်။ ထို နည်းတူစွာပင် လူပီသသူသည် ဘေးဒုက္ခအန္တရာယ်ကြား ရောက်သော်လည်း သူ၏သူတော်ကောင်းတရားကို မစွန့်။" ဟူ ၍ဖြစ်သည်။ ပြုပြင်လိုသူသည် ဆင်ခြေပေးနေစရာမလိုပါ။ သူ များကို အပြစ်တင်နေစရာ မလိုပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်ကပင် ပြုပြင် လိုစိတ်ရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။
ကျွန်တော် အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝက assembly တစ်ခုတွင် ငယ်ဆရာကြီး တစ်ဦး၏ ဆုံးမသြဝါဒ တစ်ခုကို မှတ် မိနေပါသေးသည်။ ဆရာ့သြဝါဒကို စာပုံစံဖြင့် တင်ပြပါမည်။
မြန်မာ့ဆိုင်းလောက ဦးသျှောင်ရွာစာကြီး စိန်ဗေဒါ၏အိမ် တွင် ဆိုင်းပညာသင်ယူရင်း လာရောက်အိပ်နေကြသော တ ပည့်များရှိပါသည်။ ထိုအချိန်က တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် စိန်ဗေဒါ ထက်သာလွန်သော ဆိုင်းဆရာတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မရှိပါ။ သို့သော် စိန်ဗေဒါသည် ဆိုင်းတီးကွက်များကို မပျက်လေ့ကျင့်၊ တီးကွက်ဆန်းများကို နေ့စဉ်ဖွေရှာ လေ့ကျင့်ရင်း တပည့်များကို သင်ကြားသည်။ ရံဖန်ရံခါ ညတစ်ရေးနိုးတွင်ပင် ထ၍တီးလျှင် တီးနေတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ နံနက် ၂ နာရီ ၃ နာရီတွင်လည်း တီးလျှင်ထတီးနေပြီး တီးကွက်မှတ်မိလျှင် ပြန်အိပ်တတ်ပြန် သည်။ ဤသည်ကို တပည့်အချို့က အိပ်ရေးပျက်၍ စိတ်ညစ် သော်လည်း ဆရာ့ကို မပြောရဲကြ။ သို့သော် ပြောလျှင်တော့ ပုံစံပြောင်းပြောမည်တွေးပြီး
`ဆရာရယ်၊ စိန်ဗေဒါဆိုတဲ့ ဆရာကိုကျော်ပြီး ဘယ်သူမှ မယှဉ်နိုင်ပါဘဲနဲ့ ညကြီး၊ မနက်အစောကြီး ဘာလို့ထထတီးနေရ တာလဲ။ ဆရာလည်း အိပ်ရေးပျက်၊ ပင်ပန်းပါတယ်ဗျာ`ဟု ပြောကြသည်။
ထိုအခါ ဆရာဖြစ်သူ စိန်ဗေဒါက`ငါ့မှာပြိုင်ဘက် ရှိသေး တယ်ကွ`ဟု ပြန်ပြောသည်။
`မဟုတ်တာဘဲ ဆရာရယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာ စိန် ဗေဒါဆိုတာ ပြိုင်ဘက်မရှိပါဘူး ဆရာ`ဟုတပည့်များက ပြော သောအခါ စိန်ဗေဒါပြန်ဖြေလိုက်သော စကားမှာ မှတ်သားစရာ ကောင်းလှပါသည်။
`တပည့်တို့ ငါဟာမနေ့က စိန်ဗေဒါရဲ့ ပြိုင်ဘက်ကွ။ ဒီနေ့ စိန်ဗေဒါဟာ မနေ့ကစိန်ဗေဒါထက် သာရမယ်။ ဒီတော့မှ တိုး တက်မှာပေါ့။ မင်းတို့လည်း တိုးတက်ချင်ရင် ဒီကနေ့ငါသည်၊ မနေ့ကငါထက်သာရမည် ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာပြိုင်။ မင်းတို့ တိုးတက်လာလိမ့်မယ်။`ဟု ဆုံးမစကားနှင့် မှာတမ်းခြွေလိုက် လေသည်။
ကောင်းလိုက်သည့် မှာတမ်းခြွေ ဆုံးမစကား ဖြစ်သည်။ တိုးတက်ချင်လျှင် မိမိကိုယ်သာပြိုင်၊ မနေ့ကငါထက် ဒီနေ့ငါက သာနေရမည်။ ပို၍ကောင်းနေရမည်ဆိုပြီး မိမိကိုယ်ကိုသာ ပြု ပြင်ပြောင်းလဲပါ။ သူများကို ပုတ်ခတ်အပြစ်တင်ပြီး တိုင်းပြည် ပြောင်းလဲဖို့၊ စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ ဆိုတာထက် မိမိကိုယ်တိုင်က သာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စွမ်းအားရှင် ပြည်သူများနှင့် သာဆိုလျှင် တိုင်းပြည်ကြီးလည်း သူမျာယးနှင့်ယှဉ်လျှင် ရင်ပေါင်တန်းနိုင် ပါလိမ့်မည်။
ရှေးဘဝက မဟာဒုတ်တည်းဟူသော ပါရမီ ထူးကဲခဲ့ပြီး သူဌေးသား ဖြစ်နေသော ကလေးငယ်တစ်ဦးသည် ၆ နှစ်သားအ ရွယ်တွင် `ပဏ္ဍိတ`ဟူသော ကိုရင်လေးဘဝ ရောက်ခဲ့သည်။ ထို ကိုရင်လေး၏ ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာမှာ ရှင်သာရိပုတ္တရာ ဖြစ်ပါ သည်။ တစ်ရက်တွင် ရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့် အတူ ကိုရင်ပဏ္ဍိတ ဆွမ်းခံကြွခဲ့သည်။ ဆွမ်းခံလမ်းတွင် လယ်ခင်းကို ကိုရင်ပဏ္ဍိတ မြင်သောအခါ သူဌေးသားဘဝက မမြင်ဖူးခဲ့၍ လယ်ခင်းမှန်း မ သိရှာ။ သို့ဖြစ်၍ သူ၏ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ ရှင်သာရိပုတ္တရာကို မေး မြန်းရတော့သည်။
`ရေမြောင်းပါကိုရင်။ ရေတွေစီးနေတာ တွေ့လား။ ဟို ဘက်ကရေတွေကို ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ဆီကို ရောက်အောင်ရေ မြောင်းနဲ့ သွယ်ယူရတာ၊ ကိုရင်ပဏ္ဍိတ`။
`အဲ့ဒီဘေးမှာ အသက်ရှိပါသလား ဘုရား`
ဤသို့ဤနယ်နှင့်ပင် ကိုရင်ပဏ္ဍိတ စိတ်ပြောင်းလဲရမည်။ သာဓက ၂ ခုရှိပါသေးသည်။ ရှေ့ဆက် ဆွမ်းခံထွက်ရင် လက် သမား တစ်ယောက်က ကောက်နေသော သစ်ကို ဖြောင့်စေရန် သစ်သားရေပေါ်ထိုးနေသည်ကို တွေ့သောအခါ ကလေးသ ဘာဝ စပ်စုမေးမြန်းရင်း အသက်မရှိသော သစ်ကောက်ကို ကိုယ်လိုချင်သော သစ်ဖြောင့်ရအောင် ပုံသွင်းရနိုင်ကြောင်း ဒုတိယသာဓက ရရှိခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် ဆွမ်းခံလမ်း၌ မြားတံသံချောင်းကို မီးဖုတ်၊ တူထု၍ ဖြောင့်နေသော မုဆိုးကို မြင်သောအခါလည်း ရှင်ပဏ္ဍိတကလေးက သူ့ဆရာရှင်သာရိ ပုတ္တရာကို စူးစမ်းမေးမြန်းပြန်သည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်လည်း အသက်မရှိသော သံချောင်းကိုပင် မိမိလိုရာပုံသွင်းနိုင်ကြောင်း ကို သိသွားပြန်သည်။
ဤမှာတွင်ပင် ပါရမီထူးသော ကိုရင်လေးပဏ္ဍိတ၏ ဆရာ ဖြစ်သူ ရှင်သာရိပုတ္တရာအပေါ် တင်လျှောက်သော တောင်းဆို စကားမှာ မှတ်သားဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။
`အရှင်ဘုရား၊ အသက်မရှိသော ရေ၊ သစ်သား၊ မြားတို့ကို ပင် လူသားတို့လိုရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပုံသွင်း၍ရမှဖြင့် အသက် ရှိတပည့်တော် ပဏ္ဍိတလည်း မိမိစိတ်ကို ပြုပြင်၍တရားထူး တ ရားမြတ်ရအောင် သင်ကြားပုံသွင်းပေးပါတော့ ဘုရား`။
စာရေးသူနှင့် စာဖတ်သူတို့သည် အသက်ရှိကြသည်။ မိမိ စိတ်ဆန္ဒရှိပါက တစ်ပါးသူက ပြုပြင်ပုံသွင်းပေးစရာ၊ ပြောင်းလဲ ပေးစရာ မလိုပါ။ မိမိသာလျှင် မိမိဘဝ၏ စွမ်းအားရှင်ဆိုသည် ကို သိစေချင်၍ ဤဆောင်းပါးကို ရေးရပါသည်။
လူတိုင်းသည် မိမိဘဝ၏ ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲရမည့် တ ကယ့်စွမ်းအားရှင် ဖြစ်ပါသည်။ အခြားတစ်ပါးသူများ ပြောင်းလဲ လာခြင်းသည် သူတို့ကို သူတို့ပြောင်းလဲပြုပြင်ကြ၍သာ ပြောင်း လဲကုန်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
`မိမိသာလျှင် မိမိဘဝ၏ ပဲ့ကိုင်ရှင်`ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ပါးသော ကျေးဇူးရှင်များနှင့် မိဘ ၂ ပါးကို ပစ် မှားစေလို၍ မဟုတ်ပါ။ မိမိအားနည်းချက်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို စိတ်၊ မိမိဘဝ တိုးတက်လိုစိတ် ရှိနေပါက မိဘ ၂ ပါးနှင့် ဘဝ၏ ကျေးဇူးရှင်များ တွန်းတင်ဖေးမမှုနှင့် စောင့်ရှောက်တွဲခေါ်မှု ကြောင့် မိမိလိုရာပန်းတိုင်သို့ အမြန်ရောက်ပါလိမ့်မည်။ မိမိသာ လျှင် မိမိဘဝစွမ်းအားရှင်ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်တိုးတက် ပြောင်းလဲ ရေးအတွက် စွမ်းအားရှင်ကောင်း၊ စွမ်းအားရှင်စစ်ဖြစ်ပါစေ ကြောင်းပါဗျာ။ ။